Precision trend - ညွှန်ပြချက် - MT4 အညွှန်းကိန်းများ
စနေနေ့, ဇွန်လ 6, 2020
နေအိမ် MT4 အညွှန်းကိန်းများ Precision trend – ညွှန်ပြချက်
Precision trend – ညွှန်ပြချက်
အားဖြင့် Josh white -
သြဂုတ် 22, 2019
A well known “precision trend” ညွှန်ပြချက်.
Indicator is similar to some existing indicator, but there are some deviation which makes it justifiable to have it asaseparate indicator. It tends to beagood indicator for trends. This version is the “regular” on chart version of the indicator coloring the bars according to the current “precision trend” state:
MT4 အညွှန်းကိန်းများ – ဒေါင်းလုပ်ညွှန်ကြားချက်များ
Precision trend – indicator isaMetatrader4(MT4) အညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်.
Precision trend – indicator provides for an opportunity to detect various peculiarities and patterns in price dynamics which are invisible to the naked eye.
ဒီအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီး, ကုန်သည်များအညီထပ်မံစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုယူဆနှင့်၎င်းတို့၏မဟာဗျူဟာကို adjust ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်.
How to install Precision trend – indicator.mq4?
Download Precision trend – indicator.mq4
Copy Precision trend – indicator.mq4 to your Metatrader Directory / ကျွမ်းကျင်သူများက / အညွှန်းကိန်းများ /
သင့်ရဲ့ Metatrader Client ကိုဖွင့်ပါသို့မဟုတ် restart လုပ်
Chart ကို select လုပ်ပါ, သင့်ရဲ့အညွှန်းကိန်းကိုစမ်းသပ်လိုတဲ့အချိန်သတ်မှတ်ချိန်
ရှာရန် “custom အညွှန်းကိန်းများ” သင့်ရဲ့ Navigator တွင်အများအားဖြင့်သင့်ရဲ့ Metatrader လိုင်း၌ကျန်ကြွင်း
Right click on Precision trend – indicator.mq4
setting ကိုသို့မဟုတ်စာနယ်ဇင်း ok Modify
Indicator Precision trend – indicator.mq4 is available on your Chart
How to remove Precision trend – indicator.mq4 from your Metatrader4ဇယား?
ထို Indicator သည်သင့် Metatrader Client ကိုပြေးသည်အဘယ်မှာရှိ Chart ကို select လုပ်ပါ
ထိုဇယားသို့ right click
ထို Indicator သည် select လုပ်ပြီး delete
MT4 အညွှန်းကိန်းများအောက်တွင် Download လုပ်:
ယခင်ဆောင်းပါးDsl - MACD - ညွှန်ပြချက်
Next ကိုဆောင်းပါးAuto Fibo - ညွှန်ပြချက်
ငါ့နာမကို Save လုပ်ရန်, အီးမေးလ်က, နှင့်နောက်တစ်ကြိမ်ကျွန်မမှတ်ချက်အဘို့ဤဘရောက်ဇာထဲမှာက်ဘ်ဆိုက်.
လက်ရှိတွင်သင် logged ကြသည်မဟုတ်.
» သင့်ရဲ့ Password ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရ?
MT4Indicators.com MetaTrader ဘို့ညွှန်းကိန်း၏ထောင်ပေါင်းများစွာဖို့စာကြည့်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်4MQL4 အတွက်တီထွင်. မည်သို့ပင်စျေးကွက်၏ (Forex, အာမခံသို့မဟုတ်ကုန်စည်ဈေးကွက်), ညွှန်ကိန်းလွယ်ကူသောအမြင်တစ်ခုလက်လှမ်း form မှာကိုးကားကိုယ်စားပြုဖို့ကူညီ.
© မူပိုင်ခွင့် 2018 - MT4Indicators.com
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ & အခွအေန